July 19, 2019 »
यी राशि भएका यु'वती हरु लाइ आफ्नो घरको श्रीमती अथवा बु'हारी बनाउदा घरलाई बनाउछन स्वर्ग जानिराखौ !
कहिल्लै हा'र नमानी आफ्नो भा'ग्य आफै बदल्ने यी राशि भएका व्यक्तिहरु जानिराखौ !
यस्ता खालका युवतीहरु हुन्छन निकै नै भाग्यमानि जानिराखौ !
यी ३ रासी भएका महिलाहरु जुन पुरुष लाइ पाउनको लागि धेरै नै जोड गर्दछन हेरौ ति रासिहरु
यी पाच रासी भएका श्रीमतीहरु जसले आफ्नो श्रीमान लाइ आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य बनाउछन जानिराखौ !
हलियुड / बलियुड
केकी अधिकारीको फिटनेसको रहस्य ‘जुम्बा र योग’ आलोपालो…(५ तस्विरमा हेर्नुहोस्)
अभिनेत्री केकी अधिकारीले आफू फिटनेस रहनुको रहस्य बताएकी छिन् । म्युजिकल भिडियो हुँदै सिने क्षेत्रमा पाइला टेकेकी केकीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा एक दशक बिताइसकेकी छिन् । सन् २०१० मा चलचित्र ‘स्वर’ बाट सिने क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी केकीले थुप्रै स्मरणीय फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । गत वर्ष चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बनाएर निमार्णमा प्रवेश गरेकी उनले यो वर्ष चलचित्र सँगै ‘कमेडी च्याम्पियन’ सो कमेडी टेलिभिजन कार्यक्रम ल्याउँदै छिन् । सकारात्मक सोचलाई आफ्नो सुन्दरता र तन्दुरुस्तीको कारण मान्ने केकीले ‘सम्पूर्ण’लाई ( ‘जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु’) आफ्नो फिटनेस रहस्य बताएकी छिन्। छरितो ज्यानका लागि…
सानी “बजरंगी भाईजान”की मुन्नी ४ वर्ष पछि यस्ती देखिइन् (२० तस्विर सहित)
बुलबुल । बलिउडका सलमान खानको चलचित्र बजरंगी भाइ जानकी एक पात्र ‘मुन्नी’ अर्थात् ‘हर्षाली मल्होत्रा’ उक्त चलचित्रमा रहेको याक्टिङ्ग र उनको सुन्दरताले सबै दर्शकको मन जित्न सफल भएको थियो । चलचित्र बजरंगी भाइजान २०१५ मा रिलिज भएको थियो । उनको प्यारो मुस्कान र बिना बोलीको मुन्नीको अभिनयले दर्शकको मन जितेको थियो । उनको जन्म सन् २००८ सालमा भएको थियो । हर्षाली सामाजिक सञ्जालमा निकै एक्टिभ रहेकी हुन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनका फ्याहरू निकै लोभ लाग्दा रहेका छन् । उनले आफ्नो पहिलो फिल्मबाट सबैको मनमा राज गरेकी थिइन् । सलमानको “बजरंगी…
शास्त्रका अनुसार यी राशि भएका युवतीलाई श्रीमती/बुहारी बनाउँदा घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग समान
July 19, 2019 August 24, 2019 admin
काठमाडौँ। ज्योतिष विज्ञानमा हामी जो कोही धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् । यस्तै मध्य एक राशि अनुसारको व्यवहारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ । मानिसका फरक फरक राशि अनुसार उसको व्यवहार फरक हुने गर्दछ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसार नै वैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको निर्धारण रहने गर्दछ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी तल दिएका राशि हुने युवतीहरू धेरै राम्रा र सफल बुहारी बन्न सक्छन् । वृष…
शिल्पाको पिडा कसले बुझ्यो, भन्दै मिडियामा आइन् केकी (भिडियो सहित)
बुलबुल । पछिल्लो समय निर्माता छविराज ओझा र शिल्पा पोखरेलको विषयमा नेपाली सिने क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । प्रतिक्रियामा दिने क्रममा कोही छविराजको पक्षमा बोल्दै आएका छन् भने कोही बपक्षमा त कोही दुबै जनाले यसो गर्न नहुने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही समय पहिले नायिका केकी अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एक घुमाउरो स्टाटस् लेखेकी थिइन् । अहिले उनी एक अन्तर्वतामा शिल्पाको विषयमा बोलेकी छिन् । यस अघि पनि नेपाली चर्तित कलाकारहरू किशोर खतिवडा, पियंका आयुषमान, स्वस्तिमा लगायतका कलाकारहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेपाली…
घरमै यसरी केमिकल बिना नै सर्लक्क र सिल्की कपाल स्ट्रेट गर्ने गज्जबको तरिका । जाानिराख्नुहोस्
काठमाडौं । धेरै युवतीहरूले पछिल्लो समय कपालको स्टाइलमा केही फरक पन ल्याउनको लागी होस् या आफू राम्रो दिखिन् होस् कपाल सर्ललक स्ट्रेट गरी आफ्नो सुन्दरतालाइ बढाएका हुन्छन् । कपाल स्ट्रेट गर्दा केमिकलको प्रयोग गरी प्रसोधित सामाग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ । जसले गर्दा भविष्यमा कपाललाइ असर गर्छ । पछि गएर कपाल झर्ने, टुक्रने, रूखो हुने साथै छाला मानसिक समस्या पनी बढ्ने हुन्छ । यि समस्या बाट मुक्त भएर पनी कपाल स्ट्रेट पार्न सकिन्छ । त्यसको लागी आफैले धेरै जसो दैनिक प्रयोग गर्ने भान्साका घरेलू सामनहरू उपयोग गर्न सकिन्छ । कसरी गर्ने कपाल…
अन्य देशको तुलनामा नेपाल बाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो
काठमाडौँ । कक्षा १२ सम्मको पढाइ पढी सकेपछी स्नातक तहको पढाइ पढ्नको लागी अन्य देश जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । अध्ययन सँगै राम्रो रोजगारीको अवसर पाउने भएपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको हो । नेपाल बाट आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या ६३ हजार २ सय ५९ पुगेको छ । सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको दाबी गरेता पनि आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को तुलनामा गत वर्ष लगभग ५ हजार विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको हो । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन…
सलाम छ ! १ सय ८ वर्षमा भएको विकास बराबरको कुलमानले एकै वर्षमा यसरी गरिदिए (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको १ सय ८ वर्ष पछि नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा निकै ठुलो फड्को मार्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । १०८ वर्ष पछि आगामी आर्थिक वर्षमा एकै पटक १ हजार ५०० सय मेगावाट क्षमता विद्युत् प्रणालीमा जोडिने छ । यो बिजुली नेपालले एक सय वर्षमा उत्पादन गरेको भन्दा बढी बिजुली हो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा ठुलो क्रान्ति हुनेछ । जसले गर्दा विद्युत्मा हाम्रो देश आत्मनिर्भर रहने छ, भने अर्थतन्त्र र रोजगारीमा यसले ठुलै योगदान पुग्ने छ । नेपालमा औपचारिक रूपमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०८ वर्ष…
हरियो पहिरनमा सजिएको सगुन शाही (फोटो फिचर)
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रकी एक समयकी निकै व्यस्त मोडल हुन् सगुन शाही । उनी यस क्षेत्रकीमा नयाँ होइनन् । उनको सुन्दरता र अभिनयका थुप्रै फ्यान छन् । सुर्खेतमा जन्मिएकी सगुनले नेपाली कथानक चलचित्र ‘ढुवानी’ बाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । उनले थुप्रै म्युजिक भिडियो मा अभिनय गरेकी छिन् । कुनै बेला निकै चर्चा हुन्थ्यो सगुनको । बिचमा उनले एक्कासि मोडलिङ छाडेर विदेश उडिन, त्यसपश्चात् सगुनले अब साङ्गीतिक क्षेत्र छाडेकै हुन् त? भन्ने पश्नहरू आम दर्शकअरूको आइरहदँदा फेरी नेपाल फर्केर मोडलिङ क्षेत्रमा व्यस्त रहेकी छिन् । उनी चलचित्र क्षेत्रबाट आफ्नो अभिनय…
यी राशि भएका यु’वती हरु लाइ आफ्नो घरको श्रीमती अथवा बु’हारी बनाउदा घरलाई बनाउछन स्वर्ग जानिराखौ !
यी राशि भएका यु’वती हरु लाइ आफ्नो घरको श्रीमती अथवा बु’हारी बनाउदा घरलाई बनाउछन स्वर्ग जानिराखौ...
कहिल्लै हा’र नमानी आफ्नो भा’ग्य आफै बदल्ने यी राशि भएका व्यक्तिहरु जानिराखौ !
कहिल्लै हार नमानी आफ्नो भाग्य आफै बदल्ने यी राशि भएका व्यक्तिहरु जानिराखौ ! शा’स्त्रका अ’नुसार सबै...
एजेन्सी । यस्ता खालका युवतीहरु हुन्छन निकै नै भाग्यमानि जानिराखौ ! ज्यो’तिष शा’स्त्रको आ’फ्नै एउटा छु’ट्टै...
काठमाडौँ- यी ३ रासी भएका महिलाहरु जुन पुरुष लाइ पाउनको लागि धेरै नै जोड गर्दछन हेरौ ति रासिहरु ज्यो’तिष शा’स्त्रका अनुसार यस्ता केही रा’शिहरू पनि छन् जुन राशि भ’एका पु’रुषहरू प्रति म’हिलाहरू धेरै नै आ’कर्षित हुन्छन् । धेरै ज’सो यु’वतीहरूको आफ्नो उमेर प’रिपक्व भै’सकेपछी आफ्नो जीवन सा’थीको बारेमा...
यी पाच रासी भएका श्रीमतीहरु जसले आफ्नो श्रीमान लाइ आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य बनाउछन जानिराखौ ! ...
यी महिनामा जन्मिने महिलाहरू हुन्छन् निकै सर्वगुणी ।
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रको आधारलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरूको स्वभाव र व्यक्तित्व साथै...
यी राशि हुने प्रेमी/प्रेमिका कहिले पनि छुट्दैनन् । थाहापाइराख्नुहोस्
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिलेपनी...
शिल्पा रूदाँ केकीले लेखिन् मन छुने स्टाटस् हेर्नुहोस्
काठमाडौँ २९ असार २०७६,। अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र निर्माता छविराज ओझा को खबरले सामाजिक सञ्जाल तात्यो...
चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’मा पूजा र पलको जोडी (तस्बिर सहित)
बुलबुल । चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को द्रोश्रो भाग ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ बन्ने पक्का...
आइफ्लिक्समा आयो चलचित्र ‘छक्का पञ्जा २’ । यसरी हेर्नुहोस्
धेरै प्रतीक्षित चलचित्र छक्का पञ्जा २ आइफ्लिक्समा सार्वजनिक भएको छ । लामो समय देखी दर्शकले अत्यधिक...
बिहेपछि श्रीमान को घरमा राज गर्ने यी ४ रासी भएका महिला हरु जानिराखौ !
बिहेपछि श्रीमान को घरमा राज गर्ने यी ४ रासी भएका महिला हरु जानिराखौ ! शा’स्त्रका अनुसार...
सं’सारकै स’बैभन्दा धनी अ’भिनेता यि’नको त’लब सु’न्नुभयो भने च’कित पर्नुहुन्छ ।
ए’जेन्सी । सं’सारकै सबैभन्दा ध’नी अ’भिनेता यि’नको तलब सु’न्नुभयो भने चकित पर्नु’हुन्छ ! संसार मा येस्ता...
यी चर्चित नेपाली सेलिव्रेटीको बुढौली रूप हेर्नुहोस् । तस्बिर सहित
काठमाण्डौ २, साउन । पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरूमा एक एप भाइरल भइरहेको छ । भाइरल भएको...
July 14, 2019 admin 1
फेसबुकले जुराएको भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार (तस्बिर सहित)
बुलबुल । नेपाल टेलिभिजन बाट हरेक साताको शुक्रवार प्रसारण हुँदै आएको चर्चित तथा निकै लोकप्रिय हास्य...
आदित्य नारायणले लाइभ गीत गाउँदा यस्तो क्रेज (भिडियो सहित)
काठमाडौँ असार, २३ । विगत लामो समय देखी नै भारतमा बस्दै आएका गायककार उदित नारायण झा...
© Bulbul Media 2019 All Right Received